Ruman Cabdulqaadir: Ma iyadu is toogatay mise waa la dilay? Dadaawo) - Axadle - Axadle Wararka Maanta
Muqdisho (Axadle) – Ehelada gabar yar oo dhawaan ladilay xili ay duubeysay muuqaalka TikTok ayaa beeniyay in gabadhooda ay qori ku riday gacanteeda, taasi oo si weyn loogu faafiyay baraha bulshada.
Ehelada marxuumka oo lagu magacaabi jiray Ruman Cabdulqaadir Maxamuud ayaa warbaahinta u sheegay in falkaasi uu ahaa dil waxaana ay beeniyeen warar lagu faafiyay baraha bulshada oo sheegayay in gabadha ay qorigeeda isku rogtay intii uu socday filimka.
“Gabadha waa ladilay, waxaa loo dilay si arxan daro ah, waxaa dishay gacan ka xaqdaran” mid kamid ah ehelka ayaa u sheegay marxuumka.
“Ma jiraa qof gadaal isku dili kara?” Waxay ka soo gashay khadkii timaha waxayna ka soo baxday qolka armaajada, marka waxaad dhihi kartaa cunugeyga ayaa isdilay, canugeyga waa ladilay, ayay tiri ayeeyo gabadha.
Ehelada ayaa sidoo kale sheegay in dilka uu fuliyay nin aan la magacaabin, iyagoo intaa ku daray in eheladiisa iyo qoyska gabadha ay ka heshiiyeen dilka, kadib markii ay kulmeen labada dhinac, sida ay yiraahdeen.
Sikastaba, Ciidamada Booliska Soomaaliyeed oo ka hadlay dhacdadan ayaa sheegay in ay baarayaan kiiska haweeneyda ku nooleyd degmada Yaaqshiid, taas oo u dhimatay dhaawac ka soo gaaray rasaasta.
Shalay, 19/05/2021, 16:58, meydka marxuumad Romania Cabdulqaadir Maxamuud, oo 14 jir ahayd Faadumo Cabdulqaadir Axmed, waxay ahayd 14 jir degan Xamar, degmada Yaaqshiid, waxaa la geeyay degmada Yaaqshiid iyadoo qori. gudaha degmada Suuq-Bacaad, ”ayaa lagu yiri war ka soo baxay booliska khamiistii.
Ehelada marxuumka ayaa waaxda dambi baarista ee ciidanka booliska Soomaaliyeed u sheegay waaxda dambi baarista in wax rasaas ah la ridin. Laakiin waad saxantahay. Sidaas darteed, Hogaanka Baarista Dambiyada ayaa baaraya kiiska iyo sida uu u dhacay, waxaana la wadaageynaa natiijooyinka shacabka iyo iyaga. qoysas.”
Munaasabadan ayaa saacadihii ugu dambeeyay si weyn looga hadal hayaa baraha bulshada maadaama ay noqotay mid si weyn looga hadal hayo bulshada Soomaaliyeed